ချစ်သူက စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေသည့် အခါ…. – Gentleman Magazine
ချစ်သူက စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေသည့် အခါ….
ယောင်္ကျားလေးတိုင်း ချစ်သူကောင်မလေးက စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာ ခံဖူးကြမှာပါ။ မိန်းကလေးတွေဟာ ခံစားလွယ်ပြီး သနားတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာကနေ ချစ်သူချင်းလမ်းခွဲရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူကို ပြန်ချော့ပြီး အဆင်ပြေပြေဖြစ်ဖို့ ဘာလုပ်ရမှန်မသိဖြစ်နေပါသလား။ လုံးဝအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ အာမမခံနိုင်ပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို လက်တို့လိုက်ပါတယ်။
၁။ သင့်မာနကို ခဏဘေးချိတ်ထားပြီး စကားပြောပါ။
ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားမှာ အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုကတော့ မာန ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက ဘာကိုပဲတွေးတွေ၊ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် သူတို့ရဲ့မာနကို ရှေ့တန်းတင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သင့်ကောင်မလေးနဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြတဲ့အခါမှာ မာနကို ဖယ်ထားပြီး အရင်ဆုံးစကားစပြောပါ။ ကောင်မလေးဖက်ကလည်း ချစ်တဲ့စိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု အလကားမဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ဖက်ကလည်း လိုက်လျောညီထွေ အလျှော့ပေးလာမှာပါ။
၂။ အမှားအတွက် တောင်းပန်ပါ။
တောင်းပန်ခြင်းဟာ သင့်အပြစ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ သင့်အမှားကို ခွင့်လွှတ်စေနိုင်ရုံသာမက မိန်းကလေးအပေါ်မှာ လေးစားတန်ဖိုးထားမှုကိုလည်း ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။ သူမကို အချိန်အနည်းငယ်လောက်တော့ ပေးဖို့လိုရင်လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်းပန်တာက သင့်ကောင်မလေးကို စိတ်ကြည်သွားစေမှာ သေချာပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ပွေ့ဖက်တာ၊ ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းတာတို့ကို ဘုရင်မတစ်ယောက်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ သူမမှာလည်း ချစ်တဲ့စိတ်ရှိနေသေးရင် သင့်ရဲ့အထိအတွေ့က ပျော်ရွှင်စေနိုင်မှာပါ။ မိန်းကလေးတွေက နူးညံ့ပြီး ခံစားရလွယ်တာကြောင့် အထိအတွေ့က လက်ရှိအခြေအနေအားလုံးကို မေ့ပျောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ပုံမှန်အတိုင်း ပြုမူဆက်ဆံပါ
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူတွေက အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ သင့်ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးနေချိန်မှာ သင့်ရဲ့တာဝန်က ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မဆိုးမိအောင် ထိန်းချုပ်ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သူမခံစားရအောင် လုပ်ပါ။ သင်အနေနဲ့ လိုက်ပြီး စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ သင်က ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီး သူမက စိတ်ဆိုးနေရင် သူမလည်း ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဆိုရင် နံပါတ်သုံးကို လုပ်ပါ။
၅။ ထပ်တလဲလဲ ပြောမနေပါနဲ့
လူအများစုက ကိစ္စတစ်ခုထဲကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီဟာက မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာကြီးတယ်ဆိုရင်တောင် သေးအောင်လုပ်ရမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို ထပ်ကာတလဲလဲပြောမနေဘူးဆိုရင် သူမအနေနဲ့လည်း အကြာကြီး စိတ်ဆိုးမနေနိုင်ပါဘူး။ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။ သူမဖက်က ဖြစ်ချင်တာကို ပြောလာရင်လည်း အလိုက်အထိုက် လိုက်ဆွေးနွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
၆။ လက်ဆောင်ပေးပြီး အံ့အားသင့်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။
သင် တစ်ခုခုပေးလိုက်တာနဲ့ သူမဖက်က အားလုံးကို မေ့သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူမကို ထူးခြားတဲ့ခံစားမှု ခံစားရစေပါတယ်။ သူမရဲ့ နေအိမ် ဒါမှမဟုတ် အလုပ်နေရာကို ပန်းစည်းလေးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် လက်ဆောင်အသေးလေးတစ်ခုလောက် ပို့ပေးလိုက်တာနဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ စိတ်ကိုအများကြီးပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တောင်းပန်တဲ့စာတိုလေး တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက် ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ ပွဲသိမ်းပြီပေါ့။
၇။ စာပို့ပြီး ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးပါ
သင့်ကောင်မလေး စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်နေချိန်မှာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းလိုင်းပေါ်ကနေ ဆက်သွယ်တတ်မယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရိုမန်းတစ်ဆန်တဲ့ အချစ်စကားလေးတွေ၊ တောင်းပန်စကားလေးတွေကို နည်းနည်းလောက် ရှာဖွေလိုက်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးလေးတွေနဲ့ စုတုပြုလုပ်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါ။ သူမ ရင်ထဲမှာ ပျော်သွားမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
၈။ ရယ်စရာတွေ ပြောပါ
ချစ်သူရည်းစားဆက်ဆံရေးမှာ ရယ်စရာဟာသတွေက သိသာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင် ဟာသလေးတွေပြောတာ၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလုပ်တောတွေက နှစ်ယောက်စလုံးကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးစရာကိစ္စတွေကိုလည်း မေ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
၉။ အချိန်ပေးပြီး အနားမှာနေပေးပါ
သင့်ကောင်မလေးကို ပျော်ရွှင်စေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သူမအနားမှာ ရှိနေပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကောင်မလေးဟာ သင့်ကမ္ဘာရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခံစားသွားရလောက်အောင် နေပြလိုက်ပါ။ သူမအတွက် မကောင်းတာတွေ စဉ်းစားဖို့အချိန်မရှိအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၁၀။ မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းဆက်ပါ၊ ချိုချိုသာသာပြောဆိုပါ
အချစ်က ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကြည်နူးစရာတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ ပိုပြောရခက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဆီကနေ ဖုန်းမဆက်လောက်ဘူးလို့ သူမထင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဖုန်းခေါ်ပြီး ဘယ်လောက် သတိရနေကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါ။ ပျော်စရာကိစ္စတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သူမပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ကတိပေးလိုက်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် ချစ်သူကောင်လေးက ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တာလောက် ပျော်စရာကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ ကတိပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူမကို ပိုပြီးစိတ်ချလုံခြုံစေပြီး သင်နဲ့ချစ်နေရတာကိုလည်း ပျော်ရွှင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခဈြသူက စိတျဆိုးစိတျကောကျနသေညျ့ အခါ….
ယောင်ျကြားလေးတိုငျး ခဈြသူကောငျမလေးက စိတျဆိုးစိတျကောကျတာ ခံဖူးကွမှာပါ။ မိနျးကလေးတှဟော ခံစားလှယျပွီး သနားတတျတယျဆိုပမေယျ့ စိတျဆိုးစိတျကောကျတာကနေ ခဈြသူခငျြးလမျးခှဲရတဲ့အထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလို စိတျဆိုးစိတျကောကျနတေဲ့ ခဈြသူကို ပွနျခြော့ပွီး အဆငျပွပွေဖွေဈဖို့ ဘာလုပျရမှနျမသိဖွဈနပေါသလား။ လုံးဝအဆငျပွသှေားမယျလို့ အာမမခံနိုငျပမေယျ့ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိမယျ့ နညျးလမျးတဈခြို့ကို လကျတို့လိုကျပါတယျ။
၁။ သငျ့မာနကို ခဏဘေးခြိတျထားပွီး စကားပွောပါ။
ခဈြသူစုံတှဲတှကွေားမှာ အကွီးမားဆုံးပွဿနာတဈခုကတော့ မာန ပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတှကေ ဘာကိုပဲတှေးတှေ၊ ဘာကိုပဲလုပျလုပျ သူတို့ရဲ့မာနကို ရှတေ့နျးတငျထားတတျကွပါတယျ။ သငျ့ကောငျမလေးနဲ့ စိတျဆိုးစိတျကောကျကွတဲ့အခါမှာ မာနကို ဖယျထားပွီး အရငျဆုံးစကားစပွောပါ။ ကောငျမလေးဖကျကလညျး ခဈြတဲ့စိတျရှိနမေယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှု အလကားမဖွဈပါဘူး။ သူ့ဖကျကလညျး လိုကျလြောညီထှေ အလြှော့ပေးလာမှာပါ။
၂။ အမှားအတှကျ တောငျးပနျပါ။
တောငျးပနျခွငျးဟာ သငျ့အပွဈတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာဟာ သငျ့အမှားကို ခှငျ့လှတျစနေိုငျရုံသာမက မိနျးကလေးအပျေါမှာ လေးစားတနျဖိုးထားမှုကိုလညျး ဖျောပွပွီးသားဖွဈစပေါတယျ။ သူမကို အခြိနျအနညျးငယျလောကျတော့ ပေးဖို့လိုရငျလိုပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ တောငျးပနျတာက သငျ့ကောငျမလေးကို စိတျကွညျသှားစမှော သခြောပါတယျ။
မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျ ပှဖေ့ကျတာ၊ ကွငျကွငျနာနာ နမျးတာတို့ကို ဘုရငျမတဈယောကျလို့ ခံစားရစပေါတယျ။ သူမမှာလညျး ခဈြတဲ့စိတျရှိနသေေးရငျ သငျ့ရဲ့အထိအတှကေ့ ပြျောရှငျစနေိုငျမှာပါ။ မိနျးကလေးတှကေ နူးညံ့ပွီး ခံစားရလှယျတာကွောငျ့ အထိအတှကေ့ လကျရှိအခွအေနအေားလုံးကို မပြေ့ောကျသှားစနေိုငျပါတယျ။
၄။ ပုံမှနျအတိုငျး ပွုမူဆကျဆံပါ
ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ အပွုအမူတှကေ အခွအေနကေို ပိုမိုဆိုးရှားစပေါတယျ။ သငျ့ကောငျမလေး စိတျဆိုးနခြေိနျမှာ သငျ့ရဲ့တာဝနျက ကိုယျတိုငျလညျး စိတျမဆိုးမိအောငျ ထိနျးခြုပျထားဖို့ ဖွဈပါတယျ။ သူမ လိုအပျတာတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ အဆငျသငျ့ရှိနတေယျဆိုတာကို သူမခံစားရအောငျ လုပျပါ။ သငျအနနေဲ့ လိုကျပွီး စိတျဆိုးဒေါသဖွဈနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ သငျက ပုံမှနျဖွဈနပွေီး သူမက စိတျဆိုးနရေငျ သူမလညျး ပုံမှနျအတိုငျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျဆိုရငျ နံပါတျသုံးကို လုပျပါ။
၅။ ထပျတလဲလဲ ပွောမနပေါနဲ့
လူအမြားစုက ကိစ်စတဈခုထဲကို ထပျခါထပျခါ ပွောနတေတျကွပါတယျ။ ဒီဟာက မကောငျးတဲ့အကငျြ့တဈခု ဖွဈပါတယျ။ ပွဿနာကွီးတယျဆိုရငျတောငျ သေးအောငျလုပျရမှာပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ပွဿနာဖွဈတဲ့ ကိစ်စကို ထပျကာတလဲလဲပွောမနဘေူးဆိုရငျ သူမအနနေဲ့လညျး အကွာကွီး စိတျဆိုးမနနေိုငျပါဘူး။ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားမှာပါ။ သူမဖကျက ဖွဈခငျြတာကို ပွောလာရငျလညျး အလိုကျအထိုကျ လိုကျဆှေးနှေးပေးလိုကျရုံပါပဲ။
၆။ လကျဆောငျပေးပွီး အံ့အားသငျ့အောငျလုပျလိုကျပါ။
သငျ တဈခုခုပေးလိုကျတာနဲ့ သူမဖကျက အားလုံးကို မသှေ့ားတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ လကျဆောငျပေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ သူမကို ထူးခွားတဲ့ခံစားမှု ခံစားရစပေါတယျ။ သူမရဲ့ နအေိမျ ဒါမှမဟုတျ အလုပျနရောကို ပနျးစညျးလေးတဈခု ဒါမှမဟုတျ လကျဆောငျအသေးလေးတဈခုလောကျ ပို့ပေးလိုကျတာနဲ့ မိနျးကလေးရဲ့ စိတျကိုအမြားကွီးပွောငျးလဲမှု ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ တောငျးပနျတဲ့စာတိုလေး တဈကွောငျးနှဈကွောငျးလောကျ ထညျ့ပေးလိုကျရငျတော့ ပှဲသိမျးပွီပေါ့။
၇။ စာပို့ပွီး ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးပါ
သငျ့ကောငျမလေး စိတျဆိုး စိတျကောကျနခြေိနျမှာ အှနျလိုငျးပျေါကနေ ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးလိုငျးပျေါကနေ ဆကျသှယျတတျမယျဆိုရငျလညျး အဆငျပွနေိုငျပါတယျ။ အငျတာနကျပျေါမှာ ရိုမနျးတဈဆနျတဲ့ အခဈြစကားလေးတှေ၊ တောငျးပနျစကားလေးတှကေို နညျးနညျးလောကျ ရှာဖှလေိုကျပွီး သငျ့ကိုယျပိုငျစကားလုံးလေးတှနေဲ့ စုတုပွုလုပျပွီး ပို့ပေးလိုကျပါ။ သူမ ရငျထဲမှာ ပြျောသှားမယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
၈။ ရယျစရာတှေ ပွောပါ
ခဈြသူရညျးစားဆကျဆံရေးမှာ ရယျစရာဟာသတှကေ သိသာတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုတှေ ရှိပါတယျ။ နှဈယောကျကွားမှာ ဘာမှပွောစရာမရှိဘူးဆိုရငျ ဟာသလေးတှပွေောတာ၊ ရယျစရာကောငျးတဲ့ အမူအယာလုပျတောတှကေ နှဈယောကျစလုံးကို ပြျောရှငျစနေိုငျပါတယျ။ စိတျဆိုးစရာကိစ်စတှကေိုလညျး မသှေ့ားစနေိုငျပါတယျ။
၉။ အခြိနျပေးပွီး အနားမှာနပေေးပါ
သငျ့ကောငျမလေးကို ပြျောရှငျစမေယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုကတော့ သူမအနားမှာ ရှိနပေေးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကောငျမလေးဟာ သငျ့ကမ်ဘာရဲ့ ဗဟိုခကျြဖွဈတယျဆိုတာ ခံစားသှားရလောကျအောငျ နပွေလိုကျပါ။ သူမအတှကျ မကောငျးတာတှေ စဉျးစားဖို့အခြိနျမရှိအောငျ လုပျပေးလိုကျပါ။
၁၀။ မထငျမှတျတဲ့အခြိနျမှာ ဖုနျးဆကျပါ၊ ခြိုခြိုသာသာပွောဆိုပါ
အခဈြက ခနျ့မှနျးလို့မရပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ကွညျနူးစရာတှေ ဖွဈနခြေိနျမှာ ပိုပွောရခကျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ဆီကနေ ဖုနျးမဆကျလောကျဘူးလို့ သူမထငျနတေဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဖုနျးချေါပွီး ဘယျလောကျ သတိရနကွေောငျး ပွောပွလိုကျပါ။ ပြျောစရာကိစ်စတှကေို ဝမြှေလိုကျပါ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ကတော့ သူမပြျောရှငျစဖေို့အတှကျ ကတိပေးလိုကျပါ။ မိနျးကလေးတဈယောကျအတှကျ ခဈြသူကောငျလေးက ပွောတဲ့အတိုငျးဖွဈအောငျလုပျတတျသူတဈယောကျ ဖွဈတာလောကျ ပြျောစရာကောငျးတာ မရှိပါဘူး။ ကတိပေးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ သူမကို ပိုပွီးစိတျခလြုံခွုံစပွေီး သငျနဲ့ခဈြနရေတာကိုလညျး ပြျောရှငျနမှော ဖွဈပါတယျ။
Previous: ချစ်သူစုံတွဲတွေကို ပိုမိုခိုင်မြဲစေနိုင်မည့် ၀ါသနာများ
Next: အောင်မြင်ချမ်းသာဖို့ အဆင့်(၅)ခု